Famantarana ny fikorianan'ny menaka YZQ menaka fanosotra
Fanondro fanosorana menaka menaka
Home/Ireo fambara amin'ny menaka fananganana menaka/YZQ Series fanondro menaka fanosotra menaka fanondro, tondro fanosotra mikoriana ho an'ny fitaovana lube
YZQ Series fanondro menaka fanosotra menaka fanondro, tondro fanosotra mikoriana ho an'ny fitaovana lube
Product: YZQ Fanondro fanosorana menaka menaka
1. Max. asa 40Bar
2. Habe avy amin'ny 8mm ka hatramin'ny 80mm ho an'ny safidy
3. kilasy antonony viscosity: N22～N460
YZQ andian-tsarimihetsika menaka fanondro fanondro dia ampiasaina ho an'ny metallurgical, fitrandrahana harena ankibon'ny tany sy ny sehatra indostrialy hafa ny sodina fantsona amin'ny lubrication rafitra mba hitandrina ny fikorianan'ny menaka na menaka ao amin'ny fantsona. Mety ho antonony viscosity kilasy N22 ~ N460.
Ny fikorianan'ny zana-tsipìka eo amin'ny tranon'ny YZQ andian-tsarimihetsika menaka fanondroana menaka fanondroana dia tsy maintsy mifanaraka amin'ny fikorianan'ny fitaovana miasa ao amin'ny fantsona raha mifandray amin'ny tsipika sodina.
Kaody famandrihana menaka fanosotra menaka fanondro YZQ Series
(2) YZQ = Tondro fanosorana menaka menaka
(3) Haben'ny famantarana (Jereo ny tabilao etsy ambany)
(4) C= vy vy (Tondro); S = Stainless Steel (Trefoil famantarana)
Famantarana menaka fanosotra menaka YZQ Series refy:
modely Size (MG) Max. Fanerena d L D H h D1 S Mp
YZQ-25 25 H1 " 60 26 50 41 2.3
YZQ-32 32 H1 1/4 ″ 140 100 75 35 64 54 3.2
YZQ-40 40 H1 1/2 ″ 150 105 92.5 40 85 75 4.5
YZQ-50 50 H2 "
YZQ-65 65 H2 1/2 ″ 180 120 120 50 100 90 8
YZQ-80 80 H3 " 200 130 127 57 110 10 15
[email voaaro]2021-11-17T21: 58: 46 + 00: 00